Inqaku leRedmi 8 liya kuziswa nge-29 ka-Agasti ngokusemthethweni | I-Androidsis
Inqaku leRedmi 8 sele linomhla wokubonisa
Ezi veki ziza kuthi Amahemuhemu amaninzi malunga neNqaku leRedmi 8, izolo nje iCEO yenkampani ityhile ezinye zazo. Le fowuni ithembisa ukuba lolwaziso olukhulu lweshishini laseTshayina. Kuba njengoko kutyhiliwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, iya kuba yimodeli yokuqala yenkampani kwi sebenzisa ikhamera ye-MP eyi-64.
Kwakukho amarhe okuba yeyiphi na ifowuni eyayiza kusebenzisa le khamera ye-64 MP, kodwa yonke into ibonisa ukuba iyakuba yile Redmi Qaphela 8. Ifowuni esele inomhla wokufayilisha osemthethweni. Njengokuba bekukhutshiwe kwiiveki ezidlulileyo, sizokwazi ukuyazi ngokusesikweni phambi kokuphela kwale nyanga.
Umphathi wenkampani uqinisekisile kwinethiwekhi yakhe, kuWeibo kule meko, ukuba le Redmi Qaphela 8 Iya kuboniswa ngokusesikweni nge-29 ka-Agasti. Ke ngoko, kwiintsuku ezili-10 siya kwazi yonke into malunga neli premiyamu iphakathi yoluhlu oluphakathi lweshishini laseTshayina. Ifowuni yokuqala yophawu kunye nale sensor ye-64 MP.
Malunga nokuchazwa kwefowuni kukho amarhe amaninzi kunye nokuvuza, kodwa ukuza kuthi ga ngoku asazi ukuba yinyani kwaye yintoni engekhoyo. Kukho amathandabuzo amaninzi malunga neprosesa oza kuyisebenzisa, njengoko ezinye iindawo ekujoliswe kuzo zijolise kuluhlu lwe-Snapdragon 700, ngelixa ezinye iivenkile zisithi iMediaTek Helio G90T iza kusetyenziswa.
Ngayiphi na imeko, kwiintsuku ezili-10 siza kuyisusa intandabuzo kwaye siza kubona iprosesa esetyenzisiweyo kule Redmi Qaphela 8. Umzuzu obalulekileyo wophawu lwesiTshayina, eyenye yezityhilelo zentengiso, enkosi kuluhlu lweefowuni ezikhula rhoqo kwaye ezenza indawo kuwo onke amacandelo entengiso.
Ngayiphi na imeko, le Redmi Qaphela 8 iya kuba ngumzekelo kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu Uhlobo lwesiTshayina. Icandelo elikhulayo kwimarike kwaye apho sifumana ukhetho olunomdla ngakumbi nangakumbi lukhona. Nge-29 ka-Agasti sinesivumelwano kunye nophawu lokudibana nale fowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Inqaku leRedmi 8 sele linomhla wokubonisa
IHuawei Mate X iya kuba neprosesa entsha kunye neekhamera ezintsha
Zeziphi iifowuni ze-Android ezihambelana neARCore kaGoogle